VirtualBox 6.1.4 ikozvino yave kuwanikwa neLinux 5.5 rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Musi waZvita 12, Oracle yakakanda chikuru chekuvandudza kune yako inoshanda system yekuteedzera software. Kunyangwe yaisanganisira anozivikanwa maficha maficha, pamwe chakanyanya kukosha yaive tsigiro yeLinux 5.4, yaive iyo yekupedzisira vhezheni yeLinux kernel. Gare gare, mwedzi wapfuura yakaburitsa gadziriso yakawedzera rutsigiro rwekutanga rwev5.5 yeLinux kernel, asi zvakatozosvika maawa mashoma apfuura kuti kambani inozivikanwa nekuva neyayo Java yakaburitsa. VirtualBox 6.1.4 nerutsigiro ruzere rweLinux 5.5.
Iyo yapfuura vhezheni, v6.1.2, yakatanga kutsigira Linux 5.5, asi ikazviitira iyo inomiririra masisitimu. VirtualBox 6.1.4 inotsigira Linux 5.5, zvese zviri muHost system uye mune dzakateedzerwa. Uye zvakare, ivo vaunzawo dzimwe shanduko, asi hapana basa rakakosha. Pazasi iwe une runyorwa rwemashoko akatanhamara akasvika neVirtualBox 6.1.4.
Pfungwa dze VirtualBox 6.1.4
Yakazara rutsigiro rweLinux 5.5, inosanganisira inomiririra, muenzi, uye Guest Kuwedzera.
Tsigiro yemafolda akagovaniswa kana kugadzirisa kwagadziriswa kusunungura mifananidzo.
Mikana yekuzivisa izvo EFI tsigiro kuburikidza neDMI tafura uye taura kuti iwo asiri-ATA disks akagadzirira.
Kuderedzwa kushandiswa kwenzvimbo yekumhara yeInt 10h matongi.
Yakagadziriswa isingawanzo ICEBP yekuraira nyaya.
Yakagadziridzwa isochronous inoendesa kune chaiyo muchina weUSB xHCI.
Iyo yekare clipboard sarudzo yemodifyvm raira yakawanikwa.
PaWindows, kuenderana kwakagadziridzwa yeiyo yakagovaniswa dhairekitori pamwe nePOSIX semantic yekuwedzera uye kudzoreredza kugona kumhanyisa chaiwo michina kuburikidza neHyper-V hypervisor kunyangwe ichikanganisa mashandiro.
Tsigiro yemacOS yakagadziridzwa zvakare.
VirtualBox 6.1.4 yave kuwanikwa kubva kune anovandudza webhusaiti, ayo atinogona kuwana kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Tinogona ikozvino kurodha VirtualBox 6.1.4, iine hukuru hukuru hwerutsigiro ruzere rweLinux 5.5